दशैको मुखैमा सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय, देशभर छायो खुशीयाली !PM Kp Sharma Oli. – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दशैको मुखैमा सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय, देशभर छायो खुशीयाली !PM Kp Sharma Oli.
दशैको मुखैमा सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय, देशभर छायो खुशीयाली !PM Kp Sharma Oli.
यो पनि पढ्नुहोस : यी दश गुणहरु मध्य आज म पहिलो गुणको अभ्यासको बारेमा भन्ने छु।
फेसबुक म्यासेन्जरमा देखियो समस्या, तपाईंले गरेको कुराकानी अरुले सुन्न सक्ने।